अफशोर खाता खोल्ने BE सर्वश्रेष्ठ कारणहरू
Best उत्तम कारणहरू एक अफशोर बैंक खाता खोल्ने
अफशोर बैंक खाताको लागि शीर्ष reasons कारणहरू निम्न छन्:
मुद्दा मुद्दा बाट सम्पत्ति सुरक्षा प्रदान गर्नुहोस्
सम्पत्ति विविधीकरणको लागि प्रदान गर्नुहोस्
बलियो बैंकहरू (प्रमाणको लागि तल हेर्नुहोस्)
यी सबै कारणहरू स्वस्थ वित्तीय पोर्टफोलियोको आधारभूत जग हो। यस जानकारीको बारेमा नयाँ केहि छैन। तर, मुद्दा-खुशीको वातावरणको साथ तपाइँको व्यक्तिगत वित्तीय को आधारभूत तत्व जोडी गर्न शुरू गर्नुहोस्। त्यसोभए आज विश्वको अवस्थालाई हेर्नुहोस्। त्यो उज्यालोमा, किन main मुख्य कारणहरू अपतटीय बैंकिंग धेरै लोकप्रिय बनाउँछ यति लोकप्रिय छ।
"यदि त्यहाँ आज एउटा शब्द छ जुन म तपाईंलाई छोड्न चाहन्छु, यो हो… ग्लोकल।" - फिल्मबाट नेटली केनर हावा माथि
अफशोर बैंकिंगको लागि शीर्ष Re कारणहरू
१. सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गर्नुहोस्
अमेरिकाको विश्वको जनसंख्याको 4.4..80% मात्र छ। शोकाकुल रूपमा, तथापि, यसमा विश्वका %०% वकिलहरू छन् र विश्वमा सबै मुद्दामा 96%% छ। लाखौं अमेरिकीहरू जस्तै, तपाईं दिनहुँ मुद्दा मुद्दाको जोखिममा पर्नुहुन्छ। उदाहरण को लागी, तपाई प्रत्येक पटक तपाईको कार र ड्राइव मा पर्दा तपाईं उजागर हुन्छ। प्रत्येक चोटि जब तपाई नयाँ ग्राहक लिनुहुन्छ तपाई सम्भवतः वकिलको पञ्जामा आफैँ उदा .्ग गर्नुहुन्छ। प्रत्येक चोटि कसैले तपाइँको सम्पत्ती पार गर्दछ, तपाइँको अनुमति संग वा छैन, यो एक गन्दा कानूनी लडाई ट्रिगर गर्न सक्दछ।
दिमागमा राख्नुहोस्, मानव नियमहरू लेख्नेहरू हुन्। यो केही निष्पक्ष र आकाशमा शक्ति छैन। कानून लेख्नेहरूको पेशाको बारे आफैलाई पनि याद गराउनुहोस्। राजनीतिज्ञ। जस मध्ये धेरै वकिल हो। र जब तिनीहरू कानून लेख्छन्, के तपाईंलाई लाग्छ कि ती तीनिहरू आफैंको पेशाको लाभको लागि वा विपक्षमा लेख्छन्? त्यसोभए, हामीले मान्नु पर्ने कुरा यो हो। कानुनलाई अवरोध पुर्‍याउने जो कोही वकिलले आफ्नो जेबमा हात हाल्छ, सार्वजनिक विद्रोहको लजालु स्वभाव हो, विधायिकाले कानून लेख्ने तरिका हो। सांसदहरूले कानूनलाई मुख्य उद्देश्यका रूपमा "निष्पक्षता" लेखेका थिएनन्। धेरै जसो कानूनहरू मुख्य रूपले कानूनी पेशाका सदस्यहरू द्वारा लिखित हो, र यसको फाइदाको लागि हो।
हामीसँग पहिले धनी ग्राहक थिए जो मुद्दाहरूको शृ .्खलाबाट पूरै कुकुर थिए। उहाँ एक थियो एक बैंक मा निर्देशक बोर्ड को सदस्य। उसको मुख्य कर्मचारीमा उसको एक कर्मचारीले बैंकको ग्राहकलाई सिफारिस गर्‍यो। हाम्रो ग्राहकको कर्मचारीले उल्लेख गरेन कि हाम्रो ग्राहक पनि बैंकको निर्देशक थियो। जब बैंक रियल ईस्टेट दुर्घटनामा असफल भयो उसको ग्राहकले हाम्रो ग्राहकलाई धोखाधडीको लागि मुद्दा दायर गर्यो।
उनीहरूले उनीमाथि मुद्दा हालेका थिए किनभने उसको कर्मचारीको अनजानमा असफलताको कारण उसलाई बैंकको साथ हाम्रो ग्राहकको अवधारणाको बारेमा बताउनु पर्छ। उनको बीमा नीतिले उसको पक्षमा पक्ष लिन अस्वीकार गर्‍यो किनभने मुद्दामा "धोखाधडी" भन्ने शब्द समावेश छ। बैंकले उनलाई आफ्नो ओहदाको लागि केही तिरेको थिएन। यद्यपि क्यालिफोर्नियाको सर्वोच्च अदालतले केवल हाम्रो ग्राहकको बिरूद्ध + २ मिलियन डलरको निर्णयको पुष्टि गर्‍यो। भाग्यवस उनको लागि, हामी ठाउँमा एक सम्पत्ति सुरक्षा योजना राख्छौं।
पाँच बर्ष लडाई पछि, उनले दिवालियापनको विकल्प रोजे। उनले भर्खर गर्वसाथ छोरीलाई कलेजमा राखेका थिए र आफ्नी पत्नी, छोरा र बिरामी आमालाई सहयोग गरेका थिए। बैंकरप्सी ट्रस्टीको रूपमा सेवा गर्ने वकिल मात्र होइन उहाँलाई बाँधिएको सबै चीजबाट हटाइयो। उनले आफ्नी पत्नी, बच्चाहरू र आमालाई पनि मुद्दा हाले। विगत चार बर्षको अवधिमा उनीहरूले उनीबाट प्राप्त गरेको कुनै सहयोगका लागि उनले मुद्दा हालेको थियो।
हो, दिवालिया ट्रस्टीले उनको छोरीलाई उनका बुबाले कलेज, आवास, खाना, आदि जम्मा गरेको पैसाको लागि मुद्दा दर्ता गरे। उनी रिसाए। बिल्कुलै लिविड। के यो "निष्पक्ष" छ कि उनीहरूले उनको छोरीलाई व्यक्तिगत रूपमा उसका आमाबुवाले शिक्षाको निम्ति तिरेको रकमको लागि मुद्दा हाल्न सक्छन्? सायद सहि प्रश्न हो, "कसैको जेबमा वकिलहरूले आफ्नो हात राख्नुमा कस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ?" यो प्रश्न सोध्दा तपाईंलाई कानून लेखिएको तरिका बताउँदछ। ओह, जे होस्, दिवालिया ट्रस्टीको रूपमा काम गर्ने वकिलले लुटको एक तिहाइ पायो।
बीमामा भरोसा नगर्नुहोस्
आजका नीतिहरूमा लेखिएका अपवादहरू आमिसा र स्विच स्क्यामको ठीक प्रिन्टको समान छन्। हामीले यसलाई बारम्बार देख्यौं जब ग्राहकहरू डरलाग्दो किस्सेहरूसँग कल गर्दछन्। एटर्नी प्रायः तीन गुना अधिक क्षति अधिक वकील शुल्क सor्कलन गर्न सक्छन्। तिनीहरूले त्यसो गर्न सक्दछन् यदि तिनीहरूले एक रोबिन हूड न्यायाधीशले विश्वस्त गरे कि त्यहाँ ठगीको एक inkling थियो। नतिजाको रूपमा, तिनीहरू प्राय: मुद्दामा जालसाजीको बारेमा एक वा दुई लाइनमा फाल्नेछ, वैध वा होईन।
त्यसोभए, तपाईंको पेशाको पर्वा बिना, एउटा निश्चितता यो हो। अनिश्चितताको योजना बनाउनुहोस् जब यो आउँदछ कि अर्को कसले तपाईंलाई मुद्दा हाल्ने छ। एक अपतटीय खाता खोल्नुहोस्। जेथा सुरक्षा ट्रस्ट वा कम्पनीमा खाता होल्ड गर्नुहोस्। यो संयोजनले तपाइँलाई तपाइँको पैसा राख्नको लागि एक तरिका प्रदान गर्न सक्छ। अशांत कानूनी परिदृश्यले तपाईलाई असर गर्ने छैन भनेर थाहा पाउँदा तपाई राती सुत्न सक्नुहुन्छ।
२. सम्पत्ति विविधता
के हुन्छ यदि कसैले तपाईंलाई मुद्दा लगाउँछ र मुद्दाले तुरुन्तै तपाईंको सबै अमेरिकी बैंक खाताहरू स्थिर गर्दछ? तपाईं आफ्नो बचावको लागि कुन पैसा प्रयोग गर्नुहुन्छ? तपाईं कसरी आफ्नो बिलहरू तिर्नुहुन्छ? हामीसँग कम्पनीको एक साथी छ जो एक ठेकेदार हो। निलोबाट बाहिर, एक राज्य एजेन्सी आयो र उसलाई र उसका छ जना कर्मचारीहरूलाई गिरफ्तार गर्‍यो। त्यस पछि, तिनीहरूले उसको सबै बैंक खाताहरू स्थिर गरे; नाबालिग कामदारहरूको क्षतिपूर्ति बीमा उल्लंघनको लागि सबै। उनीहरूलाई शाब्दिक रूपमा कुनै बिचार थिएन कि तिनीहरूले केहि गलत गरेका थिए।
उसले प्रति वर्ष लाखौं डलर कमायो। यद्यपि उनीसँग आफुलाई जमानत दिनको लागि पैसाको पनि पहुँच थिएन। यो भन्दै यो जान्छ कि ऊसँग उसको रक्षाको लागि एक वकील पनि भाँडाउन संसाधन छैन। अमेरिकी न्यायाधीशहरुसँग अरु देशहरुमा रहेको खातामा पैसामा तत्काल क्ल्याम्प राख्न अधिकार छैन। यो विशेष गरी केस हो यदि बैंकसँग सम्बन्धित अमेरिकी शाखाहरू छैन; अधिक त यदि एक उचित अपतटीय ट्रस्ट मा आयोजित।
केही पैसा अफशोरमा भएकोले तपाईंलाई कसैलाई थम्बको प्रेसबाट स्क्विच गर्नबाट रोक्नको लागि शक्ति दिन्छ। यसले कानुनी शत्रु वा जबरजस्ती अधिकारीलाई झूटा आरोप लगाउनबाट जोगाउन सक्छ। यो प्रतिरक्षा बिना, तिनीहरूले अचानक तपाईं तल काँसा बाहिर निकाल्न सक्दछन्, तपाईंलाई तिनीहरूको दयामा पर्न जबरजस्ती। यसले तपाइँलाई नियन्त्रणमा राख्दछ र तपाइँलाई तपाइँकै आफ्नै कमाएको नगदको ड्राइभरको सीटमा राख्न मद्दत गर्दछ।
थप लगानी विकल्पहरू
अर्को नोटमा, तपाईं पहिले नै वित्तीय कर्भ भन्दा अगाडि हुन सक्नुहुन्छ। सम्भवतः यदि तपाईं लगानी विकल्पहरू र तपाईंको पैसा प्रबन्ध गर्ने राम्रो तरिकाहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भने। र, सम्भाव्यता भन्दा बढि, तपाइँ बारम्बार समाचार च्यानलहरू जस्तै: CNN, MSNBC, Fox, Bloomberg वा YouTube वित्तीय च्यानलहरू। तपाईं तिनीहरूलाई आर्थिक प्रवृत्ति र शेयर बजारको राज्य बराबर राख्नको लागि हेर्न सक्नुहुनेछ।
प्रमुख वित्तीय खेलाडीहरू जस्तै वारेन बफे, जर्ज सोरोस, र, डा। माइकल दफन (Scion Capital का संस्थापक, LLC) २०० US को अमेरिकी आवास असफलताको केवल पूर्वानुमानकर्ताहरूमध्ये केही थिए। उनीहरूले अर्को ठूलो डिप्रेसन र अमेरिकी डलरको पतनको चेताउनी व्यक्त गरिरहेका छन। उनीहरू हाल भन्छन् यो तानिरहेको छ, तर कहिले थाहा हुँदैन।
तपाईंलाई पहिले नै थाहा होला कि बफेट र सोरोसले धेरै वर्षदेखि अमेरिकी बै cash्कहरू लिइरहेका छन्। लगानी बैंकरहरूले अमेरिकी जनतामा गरिएको लोभ र धोखाधडीबाट खासै केही सिकेका छैनन्। यसबाहेक, उनीहरूले अझै अर्को वित्तीय जमानतको अपेक्षा गर्नेछन्। यस पटक, त्यहाँ हुन सक्छ छैन अमेरिकी सरकार द्वारा एक जमानत बाहिर हुन किनभने अमेरिकी सरकार संग दिन अपर्याप्त पैसा हुन सक्छ।
अमेरिका ग्रह हो सबैभन्दा बढी withण संग देश। Debtण आंकडा संसारको इतिहास मा कुनै पनि देश द्वारा सulated्कलन अब सम्मको सबैभन्दा बढी हो। वास्तवमा, त्यहाँ वेबसाइटहरू छन् जहाँ तपाईं ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ अमेरिकी ण वास्तविक समयमा। विज्ञहरू भविष्यवाणी गर्दछन् कि त्यो रकम 40० बर्षमा पनि फिर्ता हुन सक्दैन। हामी मध्ये धेरैले त्यस्तो सोच्न वास्तविकता सामना गर्नुपर्नेछ कि हामीसँग ISDA ट्रेडिंग सम्झौताको अभाव छ त्यसैले हामी यसका गोप्य कुराहरूमा गोप्य हुन सक्छौं ठूला केटाहरू. त्यसो भए, अर्को राम्रो कुरा हामी बाँकीले गर्न सक्ने भनेको भनेको उनीहरूको पैसा सुरक्षित राख्नु हो अपतटीय खाता।
S. साउन्डर बैंकिंग प्रणाली
On Global Financeसब भन्दा भर्खरको रिपोर्ट, "विश्वको Saf० सफेस्ट बैंकहरू" भनिन्छ, कुनै पनि ठूला नाम अमेरिकामा आधारित बैंकले समेत सूची बनाएन one एक होईन। Banks० बैंकहरूमध्ये संयुक्त राज्य अमेरिकाको सूचीमा तीनवटा मात्र छन्। # ,०, # and 50 र # at० मा स्तर निर्धारण तीन साना कृषिमा आधारित बैंकहरू केवल अमेरिकी बैंकहरू थिए जसले यो बनायो। ठूला अमेरिकी बैंकहरूको साथ संयोजनमा केहि वाक्यांश रहेको छ जुन आउँदै गरेको पूर्वानुमान गरिएको आउँदै गरेको प्रलय वर्णन गर्नका लागि: असफल हुन निकै ठूलो। यो सत्यबाट अरु हुन सक्दैन।
एक पटक बैंकहरू बन्न थाल्छन् दिवाली (debtsण तिर्न असमर्थ) को हास्यास्पद रूपमा उच्च debtणको कारण र यस पटक सरकारी बेलआउटको लागि कहिँ फर्कने छैन, तपाईंको लगानीमा पैसा हराउने छ। गयो
बैंकहरूले तपाईंको बचतहरू यसको आफ्नै payण तिर्न प्रयोग गर्नेछ। भर्खरै ग्रीसमा के भयो, बैंकहरू पनि बन्द हुनेछन्। त्यस पछि, तपाईं एटीएमबाट पैसा लिन सक्षम हुनुहुने छैन किनभने त्यहाँ पैसा बाँकी हुनेछैन। कसैले गल्तीले भन्न सक्छ, "हो तर यदि मैले मेरो पैसालाई य overन्डरमा राखें र उस्तै कुरा भयो भने?"
जहाँ हामी आउँछौं। हामी विश्वको सब भन्दा बलियो, सब भन्दा सुरक्षित बै research्कको अनुसन्धान गर्छौं र उनीहरूको आर्थिक डेटामा आधारित अधिकांश सिफारिस गर्दछौं। बैंकहरू केवल "विश्वमा सुरक्षित" सूचीबाट नानोसेकेन्डमा दिवाली गर्न जान्छन्। तर यदि एउटाले बैंकमा भाग्य पाएको छ भने "सुरक्षित" सूचीमा छैन? त्यसोभए के हुन्छ भने बैंक संसारकै सब भन्दा inणमा रहेको देशमा छ? अब, यो वास्तविक चिन्ताको लागि एक कारण हो।
अगाडि खतरा: कभर अपतटीय लिनुहोस्
धेरै प्रमुख वित्तीय खेलाडीहरू र अर्थशास्त्रीहरूले डलर डराउँदा चेतावनी दिन्छन्। यो पतन खगोलीय रकमको debtण, हाम्रो अर्थव्यवस्थामा तेलको मूल्यको पुल र मुद्रास्फीति दरको कारण हो। यस अनुसार थॉमस मेटक्याल्फ, अर्थशास्त्री, स्टक ब्रोकर र अनलाइन वित्त वेबसाइट ज्याक्सका लागि योगदान पुर्‍याउने लेखक, “फेडरल रिजर्वको मुद्रास्फीतिको लक्ष्य दर २ प्रतिशत छ। जब मुद्रास्फीति आफ्नो लक्ष्यभन्दा तल झरे र उठेको कुनै संकेत देखाएनन्, संघीय रिजर्व र धेरै अर्थशास्त्रीहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। मुद्रास्फीति को दर घट्दै, तपाईं मद्दत गर्न सक्नुहुन्न तर यदि शून्य भन्दा तल झर्छ भने के हुन्छ सोध्नुहोस्। यो अर्थशास्त्रीहरूको चिन्ताको विषय हो। ”
तपाइँको पैसा सुरक्षित सुरक्षित ठाउँमा राख्नुहोस्, जुन ठूलो, युएस बैंकमा हुँदैन र अमेरिकी स्टक ब्रोकर होईन, प्रायः अमेरिकी बैंकहरूसँग नजिकको रूपमा। एक सुरक्षित, कानूनी, मा तपाइँको लगानी को एक अंश विविधता अपतटीय खाता विश्व मा एक सुरक्षित बैंक मा।
V. कमजोर कमजोरी
तपाईका सबै अण्डालाई कहिल्यै एउटा टोकरीमा हाल्नुहुन्न। यदि तपाइँ गर्नुहुन्छ भने, तपाइँले तपाइँको पैसा र लगानी गुमाउने संभावनाहरू उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्नुहुन्छ। त्यसो भए यदि तपाईं कुनै पेशामा हुनुहुन्छ जहाँ तपाईंलाई कुनै पनि समयमा मुद्दा हाल्न सकिन्छ, केही सम्पत्तिहरू सुरक्षित स्थानमा सार्न यो राम्रो विचार हो जहाँ तिनीहरू तपाईंलाई जडान गर्न सक्दैनन्। यदि तपाईं विवाहित हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईं अविवाहित हुनुहुन्छ र यदि तपाईंको परिवार छ वा यदि तपाईं केवल एक प्रगतिशील चिन्तक हुनुहुन्छ भने, पैसा अफशोरमा राख्नु तपाईंको वित्तीय जोखिम कम गर्नका लागि धेरै स्मार्ट तरीका हो।
वास्तवमा, हामी हाम्रो परिवारका सदस्यहरूलाई माया र हेरचाह गर्दछौं। जहाँसम्म, यसको मतलब यो होइन कि हामीले तिनीहरूको पैतृक सम्पत्ति प्रयोग गर्न आवश्यक छ तिनीहरूका सबै debtsणहरू तिर्नका लागि तिनीहरू एक पटक तिनीहरूले पास गरे। मृत परिवारका सदस्यहरू मृतकको सम्पत्तिसँग मृतक प्रियजनहरूको onesण तिर्न जिम्मेवार छन्। एक अपतटीय ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक अपतटीय खातामा परिवारको पैसा आबंटित गर्दा, आफ्नो प्रिय अधिकारको प्रियजनको मृत्यु पछि सफा हुनबाट बचाउन सक्छ।
Peace. दिमागको शान्ति
एक डूब जहाज संग तल नजाओ।
डग केसी, वित्तीय लेखक र स्वतन्त्र बजार अर्थशास्त्रीले अमेरिका (पतन) र रोमन साम्राज्यको पतनको बीचमा गहिरो समानान्तर बनायो। केसीले भने, “हामी थर्मोडायनामिक्सको दोस्रो कानूनबाट बच्न सक्दैनौं, जसले एन्ट्रोपीले सबै कुरालाई जित्छ र समय बित्दै जाँदा सबै प्रणालीहरू गिरावट र हावामा हाल्छ। र यो कि जटिल प्रणाली एक हुन्छ, यसलाई यत्ति धेरै ऊर्जा यसलाई लिनको लागि यसलाई लिन्छ। ठूलो र अधिक जटिल, एक अर्कोसँग जोडिएको, र यो निर्भरतामा निर्भर हुन्छ, यो बिग्रन र विनाशकारी विफलतामा बढी प्रवण हुन्छ। त्यसमा देशहरू र सभ्यताहरू पनि पर्छन्। ”
वा, हामी प्रख्यात संगीत समूह, रगत, पसिना र आँसुलाई उद्धृत गर्न सक्छौं, "के माथि माथि आउँछ तल आउनु पर्छ।"
ग्लोबल + स्थानीय = "ग्लोकल"
त्यहाँ २०० movie फिल्म छ जर्ज क्लूनी स्टारिring्ग, शीर्षक हावा माथि। यसमा, अन्ना केन्ड्रिक द्वारा खेलेको एक युवा, महत्वाकांक्षी, गेट गेटर, नताली केनरले "ग्लोकल" भन्ने शव्द उल्लेख गरेको छ। श्री क्लूनी लगायत अन्नाका एल्डरहरू यस अवधिबाट अलमल्ल परेका छन्। अन्नाले त्यसपछि वर्णन गर्‍यो कि "ग्लोकल" नयाँ शब्दावली हो जुन दुबै वैश्विक र स्थानीय बजारको मर्जलाई वर्णन गर्न प्रयोग गरिन्छ।
ग्लोकलले टेक्नोलोजी, स्वतन्त्र ब्यापार र समग्र ब्यवसायिक कौशलका कारण विश्व सानो छ भनेर देखाउँदछ। या त वैगनमा जम्प गर्नुहोस् र तपाईंको क्षितिज विस्तार गर्नुहोस्, वा पछाडि छोडिनुहोस्। आजको दिनमा ग्लोकल मानसिकता हुनु र उमेरले किनारलाई काटिरहेको छैन - यो आवश्यक छ। अपतटीय बैंकिंग तपाइँको लगानी क्षितिज फराकिलो गर्न को लागी धेरै महत्त्वपूर्ण र ध्वनि तरिकाहरु प्रदान गर्दछ।
अमेरिकी बैंकि institutions संस्थाहरूले धेरै छल, धोखाधडी, हेरफेर र चोरी गरेका छन्। शेयर बजार खेलाडीहरू र संघीय रिजर्वको लागि पनि यही नै हो। हामी माथि उल्लिखित वित्तीय मुद्दाहरूको दुबै घरेलु र 'ग्लोकली' संयोजनको सामना गरिरहेका छौं। यो अर्को वित्तीय पतनको लागि यो एकदम उत्तम आँधी हो।
समर्थन र मद्दतको लागि यस पृष्ठमा नम्बर वा पूर्ण अन्वेषण फारम कल गर्नुहोस्। आफ्नै अनुसन्धान गर्नुहोस्। तपाईंको लागि सोच्नुहोस् र बक्स बाहिर सोच्नुहोस् र — देश बाहिर सोच्नुहोस्। अमेरिकी बैंकिंग प्रणालीको शिकार नहुनुहोस्। विविधता दिनुहोस् र एक अपतटीय बैंक खातामा तपाईंको केहि रकम समात्नुहोस्।
अन्तिम अपडेट नोभेम्बर २ 17, २०२० मा भयो